हल्लाको पछि लागेर शेयर किन्ने लगानीकर्ताले बुझ्नैपर्ने हर्षद मेहताको कथा
शेयरबजारमा लगानी गर्दा होस् या यसबारे जानकारी लिन खोज्दा, सबैभन्दा पहिलो उदाहरण भारतीय शेयरबजारका चर्चित खेलाडी हर्षद मेहताकै दिने गरिन्छ । उनको कथा नेपाली शेयरबजारका लगानीकर्ताहरूका लागि पनि निकै शिक्षाप्रद हुने देखिन्छ । सहयोगीको रूपमा काम गर्ने एक सामान्य व्यक्ति मेहता भारतीय शेयरबजारका चर्चित खेलाडी कसरी बन्न पुगे ? अनि लाखौँ लगानीकर्ता र बैंकको अर्बौं रकम कसरी डुबाए भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएकाे छ:
को हुन् हर्षद मेहता ?
‘हर्षद मेहता’ त्यो नाम हो, जसले अहिले पनि विश्वबजारको लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व दुई पटकसम्म सोच्न बाध्य बनाउँछ । भारतमा सन् १९९० को दशकका लाखौँ लगानीकर्ताले विश्वास गरेका तिनै मेहता भारतीय बैंकलाई मात्र नभएर लाखौँ लगानीकर्तालाई झुटको थाङ्नामा सुताएर आफू भने अर्बौंका मालिक बन्छन् ।
उनी कसरी पियनको जागिरेबाट चर्चित ब्रोकर र खर्बौंका मालिक बने भन्ने खुलासा सन् १९९२ मा भारतीय मिडियाले गरेसँगै त्यसले भारतीय शेयरबजार मात्र नभएर संसारभरका लगानीकर्ताले एक किसिमको डरको सामाना गर्नुपर्‍यो । त्यसयता साना या ठूला सबै लगानीकर्ताको मस्तिष्कमा बस्न पुग्यो हर्षद मेहता नाम ।
भारतमा सन् १९९० ताका उनी एक नामुद शेयर दलाल बनेका थिए । वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरेका उनले सन् १९८० देखि शेयरबजारसँग सम्बन्धित कम्पनीमा काम सुरु गरेका थिए । उनी सन् १९९० मा प्रतिष्ठित शेयर कारोबारीमा स्थापित भएपछि आफ्नै कम्पनी खडा गरे र बम्बई स्टक एक्सचेन्जले शेयर दलालको लाइसेन्स दिएपछि एसोसिएट सिमेन्ट कम्पनी (एसीसी) को शेयर किनबेच तीव्र पारे ।
यसरी बने शेयरमा जिरोबाट हिरो
मेहता गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए । उनकाे आम्दानीको स्रोत राम्रो थिएन । आफू सक्षम भए पनि पैसा नहुँदा उनले भनेजति लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, उनले त्यही नहुनुको कमजोरीलाई तागत बनाए । र, ब्रोकरको काम गर्दागर्दै बैंकका कर्मचारीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाए । उनले बैंकको सिस्टममा भएका कमजोरीलाई पनि राम्रोसँग नियाले र ती कमजोरीलाई प्रयोग गर्दै शेयर खरिद गर्न बैंकहरूबाट नक्कली भुक्तानी रसिदहरू बनाई कारोबार गर्न थाले । उनले त्यतिखेरका साना बैंकहरू बैंक अफ काराड (बीओके) र मेट्रोपोलिटन को-अपरेटिभ बैंक (एमसीबी) लाई प्रयोग गरेर पैसाको जुगाड गर्न थाले । यसरी उनले भारतका ठूलाठूला बैंकहरूबाट सहज रूपमा ऋण लिन्थे ।
सर्वसाधारणलाई १० हजार रुपैयाँ ऋण दिन दशौँ पटक दुःख दिने र अनेक खालका धितो र कागजातहरू माग्ने बैंकहरूले मेहतालाई करोडौँ सहजै पत्याउन थालिसकेका थिए । बैंकहरूले जारी गरेका नक्कली रसिदहरू जसलाई आज नेपालका बैंकहरूले जारी गर्ने गुड फर पेमेन्ट चेकसरह मान्निथ्यो । त्यो लिएर उनीहरू ठूला बैंकमा जान्थे र सहजै त्यसबापतको ऋणको भुक्तानी लिन्थे । किनभने यस्ता रसिदहरूबापत बैंकले धितो प्रत्याभूति गरिएको हुने विश्वास गरिन्थ्यो तर वास्तवमा त्यो थिएन ।
यसरी मेहताले ४ अर्ब रकम नक्कली रसिदबाट लिएर शेयर किनबेच गरेका थिए । जुन बेला शेयरको भाउ बढ्थ्यो, त्यो बेला शेयर बेचेर उनी ऋण पनि चुक्ता गर्दै जान्थे । सुरुमा उनले आफ्ना सबै गतिविधि कानुनी रूपमा गरेको भान पनि पारे र बैंकहरूको विश्वास जितेर ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँ ऋण निकाल्न सफल पनि बने ।
उनले शेयरबजारबाट सस्तोमा शेयर उठाउँथे र मूल्य बढाउँथे । यसै क्रममा उनले एसोसिएट सिमेन्ट कम्पनी (एसीसी) को प्रतिशेयर २ सय रुपैयाँमा किन्न सुरु गरी ९ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याए । यस्तो अर्को एक कम्पनीको शेयरमूल्य ५० पैसाबाट २० रुपैयाँसम्म पुर्‍याए । उनी यस्ता शेयरहरू अझै मूल्य बढ्नुपर्ने खालको भएको र वास्तविक मूल्यभन्दा तल रहेको बताउने गर्थे ।
यसरी न्यून मूल्य भएका कम्पनीमा लगानी गर्न उनलाई कम्पनीहरूबाटै पनि अफर आउँथ्यो । उनी उसैगरी लगानीकर्तालाई सो कम्पनीको मूल्य बढ्छ भनेर अफवाह फैलाउँदै आफैँ लगानी गर्थे । लगानीकर्ता पनि करोडौँ रुपैयाँ जानेमाने लगानीकर्ताले हालेको देखेर र यसअघि अरू कम्पनीमा बढेको शेयरमूल्य देखेर उनको पछि लाग्दै सोही कम्पनीको शेयर किन्न तँछाडमछाड गर्दथे ।
यसरी डिमाण्ड बढ्दै जाँदा कम्पनीको शेयरमूल्य २ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने गर्थ्याे । कम्पनीको अवस्था खराब भए पनि शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता बढ्दै जान्थे । यसरी मूल्य बढ्नासाथ लगानीकर्तालाई झुक्याउँदै उनी आफू भने बढेको मूल्यमा शेयर बेचेर निस्कन्थे ।
यसरी मेहता पियनका जागिरेबाट अर्बौंका मालिक बन्न पुगे । उनको चलाखीको आकलन पनि कसैले गर्न नसकेको अवस्थामा जब टाइम्स अफ इन्डियाकी एक पत्रकारले उनको चलाखी र गैरकानुनी क्रियाकलापलाई लगानीकर्ताको माझमा उदाङ्गो पारिन्, तब मात्र अर्बौंको लगानी गरिसकेका लगानीकर्ता छाँगाबाट खसेझैँ भए । अनि थाहा पाए- लगानीकर्ता मात्र होइन, मेहताले त बैंकहरूलाई समेत उल्लु बनाएका रहेछन् ।
यो समयसम्म भारतीय निमयनकारी निकाय भारतीय सेक्युरिटिज बोर्ड (सेबी) कानमा तेल हालेर बसेको थियो भने नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू आफैँ ‘शेयरमा उछाल आउनु भनेको शेयर बिस्तार हुँदै गएको’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । नियमनकारी निकायबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिले मेहताको बिजनेस र मनोबल दुवैलाई बढाउँदै थियो भने लगानीकर्तामा विश्वास पनि बढाउँदै थियो ।
यसरी मेहताको चलखेलबाट १२४९ को बिन्दुमा रहेको सेन्सेक्स एक वर्षमा नै ४४३९ विन्दुमा पुगेको थियो । यसरी एक वर्षमा नै शेयरमा उछाल आएको थियो । अझ आश्चर्यको कुरा त तीन महिनामै २ गुणाले सेन्सेक्स बढेको थियो । १९९२ जनवरीमा २३०० बिन्दुमा रहेको सेन्सेक्स १९९२ अप्रिलमा ४४६७ बिन्दुमा पुगेको थियो । भारतीय शेयरबजारको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । यसको अर्थ यो सामान्य या भनौँ प्राकृतिक वृद्धि थिएन । त्यहाँ स्पेकुल्सन भएको थियो ।
मेहताको कर्तुतले यसरी भयो बैंक सञ्चालकको मृत्यु
यसरी मेहता दिन दुई गुणा रात चौगुणा गर्दै आफूलाई शेयरबजारमा अब्बल रूपमा उभ्याउँदै दिनदिनै करोडौँ रुपैयाँ कमाइरहेका थिए । तर, आर्थिक पत्रकार सुचेता दलालले ‘सेक्युरिटी स्क्याम अफ १९९२’ को खुलासा गरेसँगै लगानीकर्ता र बैंकहरूले मेहताको कर्तुत थाहा पाए । तर, त्यतिबेलासम्म मेहताको अफवाहमा परेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता र नक्कली रसिदका आधारमा ऋण दिने बैंक डुबिसकेका थिए ।
नक्कली रसिदका आधारमा मेहताले शेयर कारोबारको रकम भुक्तानी गरेको पोल खुलेपछि बैंकहरूले त्यस्तो रसिदको कारोबार गर्न र भुक्तानी गर्न छाडी डुबेको रकम उठाउन ताकेता गर्न थाले । शेयरबजारमा ठूलो हलचल पैदा भयो । मेहताको नक्कली रसिद जारी गर्ने प्रकरणमा मुछिएका विजया बैंकका अध्यक्षले आफ्नै बैंक भवनमाथिबाट हामफालेर आत्महत्या गरे भने अरु कैयौँ बैंकका अधिकारीहरूले गलत कामबापतको सजाय भोग्नुपर्‍यो ।
त्यतिखेर भारतीय बैंकहरूमा कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग नहुनुले यस्तो बदमासी गर्न सहयोग पुगेको आकलन गरिएको थियो । यसरी भारतीय शेयरबजार पनि बुलिसलाई छोडेर एकाएक वियरिस ट्रेण्डमा लाग्यो । हेर्दाहेर्दै समग्र पुँजीबजार नै ध्वस्त हुनेगरी घट्न थाल्यो ।
पोल खुलेसँगै सन् १९९२ मा मेहताविरुद्ध ७२ वटा आपराधिक मुद्दा लगाई पक्राउ गरियो र उनलाई शेयर बजारमा कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाई अनुसन्धान सुरु गरियो । उनीसँग विभिन्न ९० कम्पनीका २८ लाख कित्ता शेयर रहेको कुरा भारतीय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले पत्ता लगायो । उनको शेयरको त्यस बेलाको मूल्य ३ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् भारतीय रुपैयाँ २ अर्ब ५० करोड थियो । सन् १९९९ मा बम्बई उच्च अदालतले उनलाई ५ वर्ष जेलका साथै २५ हजार रुपैयाँ जरिवानासहितको सजाय तोक्यो ।
महेताको मृत्यु, २० हजार करोड रुपैयाँ स्वाहा
जेलमा सजाय काटिरहेको बेला ३१ डिसेम्बर २००१ मा उनको निधन भयो । उनको निधनसँगै बैंकका सञ्चालकले पनि मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो भने लाखौँ लगानीकर्ता लगानी डुबेका कारण डिप्रेसनको सिकार बने । यता मेहताको मृत्युसँगै ५ वटाभन्दा बढी बैंकको खबौँ रुपैयाँको ऋण पनि डुब्यो ।
सेक्युरिटिज स्क्याम अफ १९९२ करिब ४ हजार करोडको मानिन्छ, जुन आजको समयमा हिसाब गर्ने हो भने २० हजार करोड हुन आउँछ । यस स्क्यामका कारण धेरै परिवर्तनहरू आए । भारतीय धितोपत्र बजारको नियामक निकाय सेक्युरिटिज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) को नियामकीय शक्तिको दायरा बढाउन नयाँ तथा कडा नियमहरू ल्याइयो । भारतीय स्टक मार्केटमा यससँगै सेटलमेन्ट साइकल घटाउने, मिनिमम ब्यालेन्स र अनलाइन कारोबारलाई थप सुरक्षित पनि बनाउनेजस्ता परिवर्तन आए ।
यस स्क्याममा आधारित चलचित्र तथा सिरियल पनि बनेका छन् । सन् २००६ मा बनेको ‘गफ्ला’ चलचित्र यसै स्क्याममा आधारित चलचित्र हो । त्यसैगरी, चलचित्र ‘स्क्याम १९९२’ यसै स्क्याममा आधारित सिरियल हो भने अभिषेक बच्चन अभिनित ‘द बिग बुल’ पनि यसै घटनामा आधारित चलचित्र हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, १७:१९:००